के ट्रम्पको कडा रेखा चीनतिर डलरको गिरावट र अर्थव्यवस्थाको पतनको शुरुआत हो? : मार्टिन Vrijland
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	18 मई 2020 मा	• 10 टिप्पणिहरु
सुनको स्तर र तेल मानकको क्रमिक रिलीजको साथ, डलर मुद्रामा परिणत भयो जुन सीमा बिना मुद्रित हुनेछ। हामी यसलाई फिएट पैसा भन्छौं। फिएट पैसा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि खराब छ। जे भए पनि, सयौं अरबौं मुद्रण गर्दा पैसाको अवमूल्यन हुन्छ।
किनभने अमेरिकी केन्द्रीय बैंक (फेड) ले यस डलर निर्माण प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्दछ र डलर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मानक हो, डलरको यो ह्रासले युरो लगायत अन्य मुद्राको अवमूल्यनलाई पनि प्रभाव पार्छ।
तेलको एक ब्यारेलको मूल्य क्रमशः नकारात्मक हुँदै गइरहेको छ (जसको अर्थ यो हो कि तपाईंलाई तेल किन्न पैसा भयो), यो राम्रो कुरा हो कि तेल अब मानक छैन। तेल बिल गेट्स सबैभन्दा नयाँ खेलौना द्वारा जे भए पनि प्रतिस्थापन गरिनेछ (ध्यान केन्द्रित सूर्यको प्रकाश दहन इञ्जिनहरूका लागि हाइड्रोजन बनाउन)।
हामीसँग त्यस्तो केही बाँकी रहेको कारण डलरको कुनै पनि मापदण्ड अमेरिकी सेनाको प्रभुत्व हो (अहिले सम्म)। नाटोले हरेक देश वा नेतालाई डलरबाट टाढा जान बाध्य तुल्यायो। यो जहिले पनि बम र ग्रेनेड र नेता सफा साथ हस्तक्षेप गरेको छ।
युगोस्लाभिया १ 904० को दशक। सायद कुनै debtण (यति डलर स्वतन्त्र)। कडा आफ्नै सेना (नाटोको सदस्य होईन र न। At मा विश्वमा सेनाको शक्तिको हिसाबले)। टिटोको मृत्युपछि जनस each्ख्याले एक अर्काको बिरूद्ध युद्ध सुरु गर्न थाल्यो जुन देशलाई ध्वस्त पार्नुपरेको थियो। यसबाट आईएमएफले पुनःनिर्माणको लागि पैसा लिन र bण लिन सक्थ्यो (डलर निर्भरता)।
इराक, सद्दाम हुसेन युरो मा तेल व्यापार गर्न चाहन्थे। सफा गर्नुहोस्।
लिबिया, मोअम्मर मोहम्मद अल-कधाफी एक सुन समर्थित अफ्रिकी दिनार डलर निर्भरता जारी गर्न चाहन्थे। स्वच्छ र सफा
अब सिरियाको युद्धले देखायो कि नाटो (अमेरिकी खेलौना) शक्ति अब प्रमुख छैन, त्यसैले विश्वव्यापी डलर मापदण्डको अन्त्यको शुरुवात हो। अधिक र अधिक देशहरूले अमेरिकालाई फर्काइरहेका छन्, र डोनाल्ड ट्रम्पको एक मात्र जवाफ भनेको कडा लाइन हो: व्यापार युद्धहरू। र अब - कोरोनाभाइरस अवस्थाको साथ - उनी फेरि चीन बेस्सरी बढ्ने क्रममा फर्कन्छन्। संग उसको अन्तिम अन्तर्वार्तामा फक्स न्यूज उनले भने यहाँसम्म कि उहाँ चीनसँग सबै सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहानुहुन्छ।
रेकर्डका लागि यो जान्न उपयोगी छ कि चिनियाँ सरकारले आफ्नो अर्थव्यवस्था बढी वा कम डलरमा राख्न सकेको छ। त्यो डलर केवल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि प्रयोग भएको थियो तर चिनियाँ केन्द्रीय बैंकले जहिले पनि देशको बहुराष्ट्रियहरूबाट डलर किनेको छ र चिनियाँ युआनलाई आफ्नै सीमानामा नै बलियो राख्न मद्दत गरेको छ।
यसका साथै विश्वका धेरै देशहरूमा चीनको ठूलो आर्थिक प्रभाव रहेको छ र चिनियाँ बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाले १२० देश र large० ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहयोग सुनिश्चित गर्दछ। त्यसले ती देशहरू र कम्पनीहरूलाई चीनमा बढी निर्भर बनाउँछ।
जब डोनाल्ड ट्रम्प चिच्याउँछन् कि उनी चीन लाई पूर्णतया छोड्न चाहन्छन्, यो एकदमै शक्तिशाली महाशक्तिको हताशताको अन्तिम कार्य जस्तो छ जुन आफ्नो पकड गुमाउँदैछ। जब ट्रम्पले आफ्नो क्रोध कोरोना भाइरसप्रति चीनको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ भनी बहाना गरे भने उनको निराश हुनुको वास्तविक कारण डलरले आफ्नो विश्व व्यापारको स्तर गुमाउने सम्भावना छ र चिनियाँ युआनले जमिन लिन थालेको छ।
चीनले आफ्नै सिमाना भित्र एउटा परिचय गरायो नयाँ साइबर पैसा भुक्तान को माध्यम: e-RMB (रेन मिन द्वि, जसको अर्थ हो 'जनताको पैसा')। यो इ-आरएमबी हाल शेन्जेन, सुझोउ, चेng्गदु र जिओन सहित धेरै चिनियाँ शहरहरूमा परीक्षण भइरहेको छ। यी शहरहरूमा, e-RMB प्राय: सबै भन्दा तलब भुक्तान, सार्वजनिक यातायात, खाना, र खरीदको लागि सबै विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिन्छ। प्रणाली WeChat र AliPay (अलीबाबा बाट) लाई जोडिएको छ। यो नयाँ cryptocurrency चिनियाँ केन्द्रीय बैंक द्वारा कभर गरिएको छ।
आईएमएफले २०१ 2016 मा विशेष रेखाचित्र अधिकारको सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो, जुन अवस्थित "पुरानो मुद्राहरू" यस नयाँ SDR cryptocurrency मानकको लागि एक प्रकारको बैकअपको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। यस आईएमएफ पहलमा समस्या भनेको यो हो कि यस नयाँ क्रिप्टोकरन्सी मानकमा डलरको 41,73१.10.92% हिस्सा छ, जबकि चिनियाँ युआनको १०.8.33%% हिस्सा छ (जापानी येन .8.09..30.93%, ब्रिटिश पाउन्ड .XNUMX.०%%, युरो .XNUMX०..XNUMX%%)। त्यसैले चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वको सब भन्दा बलियो अर्थतन्त्र बन्न लागेको छ, आईएमएफ क्रिप्टो मानक (एसडीआर) को हिस्सा विवादास्पद सानो छ।
त्यसैले त्यहाँ वास्तव मा एक वित्तीय युद्ध भइरहेको छ; एक युद्ध जुन नयाँ पैसाको मानक सेटिंगमा घुम्छ। डलरले शक्ति गुमाइरहेको जस्तो देखिन्छ र कोरोना स crisis्कटले अन्तिम धक्का दियो, किनकि मनी प्रेस यति छिटो कहिल्यै चल्दैन। अब यो हितोपदेश हो, किनकि कुनै पैसा अब छापिएको छैन। कम्प्युटरमा केवल संख्या वृद्धि गरिएको छ।
चिनियाँ युआन बलियो हुँदै गएको देखिन्छ, जबकि डलरले अधिक मूल्य गुमाउँदै छ।
अब प्रश्न यो छ कि बहुराष्ट्रिय र बैंकहरू डलर मानकबाट युआन मानकमा जान चाहन्छन् कि फेरि त्यहाँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सुनको मानक हुनुपर्दछ। एसआरआर एक क्रिप्टो मानक को रूप मा या त एक विश्वसनीय विकल्प जस्तो देखिँदैन, किनभने डलर को अवमूल्यन संग, कि SDR पनि संग पतन भयो (त्यो SDR मा .१.41,73% को डलर शेयर को कारण)। त्यसैले तपाईंले फिएट मनीको प्रभावबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुनेछ (असीमित मुद्रित पैसा) एक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको आधारको रूपमा।
डलर आफ्नो अन्तिम समयमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। अमेरिका र युरोपको अर्थव्यवस्था आउँदो महिनाहरूमा करोना स of्कटको प्रभावबाट कठिन प्रभावित हुनेछ। सुपरमार्केटमा मूल्यहरू पहिले नै बढ्दो छ। धेरै कम्पनीहरूमा गिरावट आउँदछ र सयौं अरबौं मुद्रित भएको छ, पैसा को यस मूल्यह्रास आउँदै गरेको महिनाहरु मा सबै को लागी तुरुन्त मूर्त हुन्छ। जोसँग अझै केही बचत छ चिन्ता गर्न थाल्छ।
वास्तवमा, एक डूम परिदृश्य धेरै कम्पनीहरू र सेभरहरूको लागि लुकिरहेको छ। डलर को गिरावट संग, सुन मात्र एक सुरक्षित सुरक्षित ठाउँ देखिन्छ, किनभने विश्व मा सुन को मात्रा अक्सर एक वित्तीय रिसेट को समयमा एक मुद्रा कवर गर्न प्रयोग गरीन्छ।
जे होस्, बिटकॉइनले बढ्दो रूपमा त्यो सुरक्षित आश्रय प्रदान गर्दछ। गिरने बैंकहरूको सम्भावित खतराको साथ (किनकि दिवालिया कम्पनीहरू र व्यक्तिहरूले अब उनीहरूको loansण वा ती loansणमा ब्याज तिर्न सक्दैनन्), जमानत र जमानतको खतरा लुकिरहेको छ। यसको मतलब कि या त राज्यले बैंक बचत गर्दछ (पढ्नुहोस्: करदाता) वा त्यो बचत बैंक बचत गर्न प्रयोग गरिन्छ।
त्यसोभए हामी आउँदै गरेको महिनाहरूमा बिटकइन र सुनतर्फ पैसाको कडा उडान देख्दछौं।
यो अनुमान लगाउन सकिन्छ कि बिटकॉइनको लागि उडान सबैभन्दा ठूलो हुनेछ, किनकि तपाईं केवल एक बटनको धक्काको साथ सुन किन्नुहुन्न। तपाईंले कुनै समय बिनामा बिटकॉइन वालेट खोल्नुभयो र आज तपाईंको बैंकमा के छ तपाईंको भोलि बिटकइन वालेटमा हुनेछ। बिटकोइनको लागि त्यो उडान, खनिज सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो जुन यो आधारित छ, बिटकॉइनले त्यस्तो कडा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति दिन्छ कि यसले डलरको ठाउँ लिन सक्ने सम्भाव्यता छ।
चिनियाँ युआन चिनियाँ केन्द्रीय बैंकले कभर गर्न सक्दछ, तर यसको कारण सोना अझै विश्वव्यापी रूपमा ब्याकअपको रूपमा काम गर्दछ भन्ने तथ्यमा केही कुरा लुकेको छ कि तपाईंले सुन खानी गर्नुपर्दछ। तपाईंले सुनको खानीमा उत्खनन कार्यको माध्यमबाट यस मैदानबाट बाहिर जानु पर्छ, जुन महँगो र श्रममूलक प्रक्रिया हो र त्यहाँ अभाव छ। बिटकॉइन खानी सिद्धान्त उही विचारमा आधारित छ, जसलाई वर्णन गरिए अनुसार छ यो लेख.
विश्वव्यापी बिटकॉइन व्यापारको मात्रा अब यत्तिको महान छ कि धेरै भन्दा बढी बहुराष्ट्रीय र ठूला लगानीकर्ताहरू यसमा रुचि राख्छन् र प्रवेश गरिरहेका छन्। यदि तपाइँ यस तथ्यलाई लुकिरहेको हाइपर-मनी मूल्यह्रास र डलरको सम्भावित गिरावटमा थप्नुहुन्छ भने, यस्तो लाग्छ कि धेरै बिटकइनका लागि बम आश्रय हुनेछ। यसैले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानक सेट गर्ने सम्भाव्यता छ र यदि डलर खस्छ भने बिटकॉइनले आईएमएफको एसडीआर क्रिप्टोकुरेन्सी मानकमा डलरको स्थान लिन सक्दछ।
स्रोत लिङ्क सूची: edition.cnn.com, ft.com, globalresearch.ca
ट्राम्पले आफ्नो स्वीकृतिको युद्ध सञ्चालन गर्दै गर्दा, चीन युआनले डलरको अधिक स्थानमा रहेको छ
ईतिहासले year ० बर्षको चक्र देखाउँदछ र सबै संकेतकहरू अपरिहार्य गहिरो मन्दी देखाउँदछ
भेनेजुएलाले हामीलाई कस्तो आशा गर्छ र युरोप र क्रिप्टकोस्रेंसीको विश्व संसारको रूपमा परिचय दिन्छ भन्ने उदाहरण हो
किनकि ट्रान्सले उत्तर कोरियामा आगोमा तेल ल्याउँदछ, यरूशलेम र वेनेजुएला, शक्ति पूर्व तिर फर्काउँछ
ट्याग: र, बेल्ट, Bitcoin, bri, चीन, चिनियाँ, कोरोनाभाइरस, संकट, डलर, ई-RMB, विशेष, पैसा ह्रास, पहल, सडक, एसडीआर, ट्रम्प, Val, युआन
18 मई 2020 मा 13: 22
मेरो विचारमा, हामी पहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय (पेट्रो) डलर र स्थानीय अमरीकी डालरको बीच अमेरिकी डलरको विभाजन देख्नेछौं। उत्तरार्द्धले भेनेजुएला जस्ता परिदृश्य जस्ता ठूलो रूपमा अवमूल्यन गर्नेछ। डलरको विभाजन वित्तीय रीसेटको हिस्सा हो, किनकि प्रत्येक देशले अमेरिकी डलरमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कोषको लागि अमेरिकी बैंक secण जमानतमा अमेरिकी debtण जमानतमा धेरै नागरिकको बचत (स्थानीय मुद्रामा, जस्तै आईएनआईएस रुपैयाँ) मा लगानी गरेको छ। देशहरू त्यसैले उनीहरूका दावीहरू कहिल्यै देख्न चाहँदैनन् अमेरिका z = वाष्पीकरण हाइपरइन्फ्लेसनको कारण, त्यसैले विभाजनको विचार हो। यसबाहेक, चीनसँग अमेरिकी debtण धितोको एक खरब भन्दा बढीको स्वामित्व छ। यदि चीन गलत हुन चाहन्छ भने उनीहरूले बजारमा dumpण फ्याँक्न सक्छन् र यदि कुनै माग छैन भने, फेडले यो buyण किन्नुपर्नेछ जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा हाइपरइन्फ्लेसनलाई ट्रिगर गर्नेछ। ट्यारिफको ट्यारिफको कट्टर रेखा यसैले जनस the्ख्याको लागि वित्तीय रिसेट लागू गर्नका लागि चरण हो जस्तो देखिन्छ। यो नबिर्सनुहोस् कि वित्तीय रिसेटको अर्थ धेरै debtण लिखित रूपमा लिइनेछ, किनकि पुनःसेटको साथमा नयाँ प्रणालीमा बैंकरलेट प्रणालीबाट खराब debtsणहरू समावेश गर्नमा कुनै मतलब छैन। कृपया नोट गर्नुहोस्, यो केवल एक सेलेक्ट ग्रुपमा लागू हुन्छ र धितो वा निजी debtsण भएका व्यक्तिहरूमा होइन, यी नयाँ प्रणालीमा सजिलै जारी रहनेछ। म यो पनि विश्वास गर्दछु कि अन्तर्राष्ट्रिय डलरको दृश्यबाट हराउनुभन्दा अघि हामी यसको ठूलो प्रशंसा देख्ने छौं। यो वृद्धि मुख्य डेरिव्हेटिभ्स जटिल समाधान गर्न डलरको मागको कारण हो। मलाई लाग्छ यो समय पनि आउनेछ जब खेलाडीहरू (बैंक र केन्द्रीय बैंक) उनीहरूको अमेरिकी sellण बेच्नेछन्।
18 मई 2020 मा 13: 55
19 मई 2020 मा 12: 59
18 मई 2020 मा 14: 45
18 मई 2020 मा 18: 13
18 मई 2020 मा 18: 14
18 मई 2020 मा 20: 17
18 मई 2020 मा 22: 05
19 मई 2020 मा 07: 58
21 मई 2020 मा 16: 00
« प्रत्यक्ष लोकतन्त्र लकडाउन र अर्थव्यवस्थाको रिकभरीबाट सर्टकट
तपाईं अब भण्डारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न यदि तपाईं काउन्टरमा तपाईंको नाम र दास नम्बर दिनुहुन्न र यो केवल सुरूवात हो »
कुल भ्रमण: 2.427.321